रुसबाट ग्यास नआए चिसोले जम्नेछ युरोप | SouryaOnline
रुसबाट ग्यास नआए चिसोले जम्नेछ युरोप
सौर्य अनलाइन २०७८ माघ १३ गते ९:४१ मा प्रकाशित
मस्को । यूरोपको उर्जा संकट अब एक आर्थिक समस्याबाट राजनीतिक चुनौतीमा बदलिने भएको छ । पश्चिमा देशले रुसमाथि खुलम खुल्ला ग्यास युद्ध सुरु गर्न लागेको आरोप लागाएका छन् । तर उनीहरुको यो आरोप क्रेमलिनले अस्वीकार गर्दै आएको छ । युरोपलाई फरक–फरक प्रभाव क्षेत्रवाला आवश्यकतामा बाँड्न र ग्यास बजारको खेलको नियम पनि फेर्नका लागि रुसले पश्चिमी देशमाथि एक किसिमको शर्त राखेको छ । युरोपेली देश आफ्नो जनसंख्या र उद्योग दुबै बचाउन युद्ध स्तरमा तयारी गरिरहेको छ र अमेरिका यो कुराबाट खुसी देखिएको छ । किनकी युरोपलाई रुसी ग्यासको सट्टा उच्च मूल्यमा आफ्नो ग्यास उपलब्ध गराउन पाउनेछ ।
विश्वव्यापी उर्जा संकटको सुरुवात गत वर्षको हिउँदमा नै भएको थियो । हिउँद आउँदा आउँदै अवस्था झनै बिग्रिएको थियो । पहिले ग्सास र अब तेलको मूल्यले पनि युरोपलाई आक्रान्त पारेको छ । युरोपमा उर्जा संसाधनको यत्तिको कमी छ कि सर्वसाधारणदेखि उद्योगीसम्म बिजुली र ग्यासको बील कुनै हिसाब किताब बिना तिरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा युरोपमा अचानक किन ग्यासको संकट गहिरियो भनेर सोध्न थालिएको छ । उनीहरु चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर जम्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ? यसका कयौँ कारण छन् ।
यूरोपको उर्जा संकट कहिलेसम्म चल्ने छ ? यूरोपले यसको नोक्सानी उठाउनु पर्नेछ ? ग्यास बजारको खेलको नियम कहिले फेरिनेछ ? र रुसको कमाइको प्रमुख स्रोत मानिने हाइड्रोकार्बनको प्रयोग कम गर्न जुन हरित उर्जालाई बढावा दिने कुरा गरिएको छ, त्यसको भविष्य के हो त ? यी सबै प्रश्नको जवाफ यो कुरामा निर्भर गर्छ कि यूरोप र रुसबीच जुन राम्रा विषयमा मतभेद भएको छ, त्यसलाई कत्तिको चाँडो सुल्झाउन सकिन्छ । युरोपलाई जति प्राकृतिक ग्यासको आवशयकता पर्छ, त्यसको करिब एक तिहाई रुसले आपूर्ति गर्दै आएको छ । तर गत हिउँदपछि उसले ग्यास आपूर्तिमा ठूलो कटौती गरेको छ ।